गोरिल्ला ग्लासले के साँच्चै तपाईँको फोनको स्क्रीनलाई फुट्नबाट बचाउँछ? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनगोरिल्ला ग्लासले के साँच्चै तपाईँको फोनको स्क्रीनलाई फुट्नबाट बचाउँछ?
July 30, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, शब्द 0
पहिलो आइफोनबाट उपयोगमा आउन थालेको अमेरिकन कम्पनी कर्निङको गोरिल्ला ग्लास वर्तमानमा प्राय विश्वभरि ६ अरब मोबाइल फोनहरूमा उपयोग भइसकेको छ। खबरम्यग्जिनमा अहिले यो लेख पढ्दा तल माथि गर्न छुइरहनु भएको तपाईको फोनको स्क्रिन पनि सायद गोरिल्ला ग्लास नै होला।
नयाँ मोबाइल किन्दा पहिला नै हामी सोध्ने गर्दछौं कि यसमा गोरिल्ला ग्लास छ कि छैन? भनेर। गोरिल्ला ग्लासलाई हामीले हाम्रो मोबाइल फोनको मजबुतीको निशानीको रूपमा हेर्ने गरेका छौं।
तपाईंले आँखा बन्द गरेर भरोसा गर्नुभएको कर्निङको गोरिल्ला ग्लासले के साचै तपाईको फोनको स्क्रीनलाई १०० प्रतिसत टुट्नबाट बचाउँदछ त? आउनुहोस् बुझौं।
भर्खरै मात्र कर्निङले आफ्नो गोरिला ग्लासको सिक्स जेनेरेसन सार्वजनिक गऱ्यो। कम्पनीको दावी अनुसार यो ग्लास पुरानो गोरिल्ला ग्लास ५ को तुलनामा दुइगुणा बलियो छ। अनुसन्धानबाट थाहा लागेअनुसार एक साधारण मानिसले बर्षमा असौत ७ चोटी नराम्रो तरिकाले आफ्नो फोन हातबाट खसाउँदछ र बेसी जस्तो उचाई १ मिटरको हुँदछ।
गोरिला ग्लास ६ ले ल्याबटेस्टमा १५ चोटी यो ठोक्करलाई सहन सक्यो। तर यो गोरिल्ला ग्लास टुट्दैटुट्दैन भन्ने चाहीँ होइन। मोह्स हार्ड्नेस स्केलमा गोरिला ग्लासको भ्यालु औसतमा ६.४-६.८ भित्र पर्दछ। यो स्केलभित्र पर्ने कुनै पनि सतहलाई ग्लास अनि फलाम जस्तो वस्तुले नोक्सान पुऱ्याउन सक्दैन। कारण यिनीहरूको6देखि मुनिको भ्यालु छ तर धुलो र हिरा जस्तो अति ठोस पदार्थहरू जसको ६ अथवा ७ देखि माथीको भ्यालु छ, तिनीहरूले भने आरमले नोक्सान पुऱ्याउन सक्छ।
तपाईको फोनलाई चाबीहरू भन्दा बेसी धुलोहरू, जसलाई कोहीबेला तपाईंले देख्नु पनि हुँदैन त्यसबाट नोक्सान हुने खतरा ज्यादा छ। गोरिल्ला ग्लास छ भने फोनको स्क्रीन टुट्दैन भन्ने भ्रम आज धेरै फैलिएको छ।
गोरिला ग्लासले स्क्रीनमा स्क्राच आउने तथा टुट्ने सम्भावनामा कमि ल्याउँदछ तर सम्पूर्ण रूपमा बचाउ भने गर्दैन। कर्निङलाई वर्तमानमा आसाइको ड्रेगन ट्रेल ग्लास तथा सफाइर ग्लासले कडा चुनौती दिइरहेको छ तर यो उद्योगमा कर्निङको दवदवालाई भने कसैले नकार्न सक्दैन।
बढ्यो विवाद: स्वस्थ्य विभागको प्रेस विज्ञप्तिपछि एसपीवाईएफ-ले दियो स्पष्टीकरण